Defragmenting ny fiara mafy sy ny fomba hanaovana izany
Nanapa-kevitra aho androany mba hanoratra momba defragment ny mafy kapila , satria be dia be ny olona manome izany dingana tena kely saina.
Microsoft Windows 10 mamoaka Insider Preview 14251 + Manorena fitambaran`ireo vaovao ho an`ny Windows Update 10 Malagasy Bible 1511
15 fanehoan-kevitra A mialoha famotsorana an`i Windows 10 Redstone ho an`ny PCs sy ny takela-bato fotsiny nanao dingana iray hafa noho ny firongatry ny fivoriana vaovao eo ambany ny isa 14251 ao amin`ny fifadian-kanina fantsona fanavaozam-baovao.
Microsoft nanambara ny Lumia 930 sy 830 Gold Edition
Taorian`ny filazana anatin`ny andro vitsivitsy, ary ny voalohany sary ao amin`ny fiandohan`ny mialoha-baiko eo amin`ny Shinoa tsena, ny Microsoft tamin`ny fomba ofisialy dia nanambara ny volamena fanontana Lumia 930 sy 830.
DLNA mpizara for Philips TV. Mijery sarimihetsika avy amin`ny solosaina ny TV
ato amin`ity lahatsoratra ity, isika dia ampiendrehina ny haino aman-jery lohamilina (DLNA) eo amin`ny solosaina, fa Philips TV.
Ny mampirehitra izao tontolo izao ultrabook
kahie Mazava ho azy, ny lanjan`ny zava-dehibe ny fotoana.
Skype mpampiasa Nampitandrina momba ny vaovao ao amin`ny Windows kankana
& laquo, kankana »
System Properties in Windows XP | Encyclopedia of Windows
Configure [XP] Ny fototra fanahafana masontsivana izay vokany eo Windows, dia azo ovaina amin`ny varavarankely iray, izay atao hoe System Properties .
Ny toerana dia tsy miankina fitambarana fitaovana sy tia fampahafantarana sy fanabeazana loharano. Vaovao rehetra loharanom-baovao azo avy-bahoaka. Ny fitantanan-draharaha dia tsy mihatra ny nanoratra ny fitaovana ampiasaina. Zo rehetra isan `ny tompony